Himalaya Dainik » मुख्यमन्त्री राई पत्नीको आक्रोसः हामी हेलिकप्टर चढ्दा तपाईँको टाउको दुखाइ किन ?
मुख्यमन्त्री राई पत्नीको आक्रोसः हामी हेलिकप्टर चढ्दा तपाईँको टाउको दुखाइ किन ?
झण्डै २० दिनअघि हेलिकोप्टर लिएर माइती गाउँ गएको तस्बिर जाङ्मुले नै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका थिए । केहीले सरकारी पैसाको दुरुपयोग गर्दै हेलिकोप्टरमा ससुराली गएको आरोप समेत लगाएका थिए।
त्यसको जवाफमा बुधवार सामाजिक सञ्जालमार्फत जाङ्मुले स्पष्टिकरण दिएकी हुन्। ‘यो त अति नै भो! झुटको खेतीमा रमाउने, सत्यकाे खाेजी नगर्ने, अनि हावामा सबै दाैडने! हाे म मेरो श्रीमान माननीय मुख्यमन्त्री सहित हामी मेरो माइती गाउँ गएकाे साँचाे हाे। मेरो श्रीमान पार्टीकाे औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन जानु भएकाे हाे। तर अरुले भने जस्ताे चार वटा हेलिकप्टर लिएर सरकारी पैसा दुरूपयोग गरेर होइन। मेरो परिवार निजी खर्चमा हेलिकप्टर लिएर आफ्नो गाउँ जानु भयो तपाईँको टाउको दुखाई किन?’
जाङ्मुले धेरै झुटकाे खेती र धन्दा गर्ने ब्यापार किन गर्नु पर्‍यो भनी प्रश्न पनि उठाएकी छिन। उनले आफ्नो माइती भएकै गाउँमा श्रीमानकाे कार्यक्रम परेको र मुख्यमन्त्री आफ्नो व्यवस्थापनमा गएको र सँगै आफूहरु पनि गएको स्पष्टिकरण दिएकी छिन।
बिवादमा ‘दोहोरी च्याम्पियन’- कल्पना दाहाललाई बेइज्जत गरेको भिडियो भाइरल
जब पोखरा विमानस्थलमा धुवाँको मुस्लो दन्कियो…
प्रचण्डले बनाइदिए एमालेलाई ३ टुक्रा
फ्यानको दिल धड्काउने टाइगर श्राफको ‘फिट बडी’ ! हेराैँ २० तस्बिर
लेडिज पकेटमारको बयानः दैनिक ५० हजार आम्दानी, चोरेरै गोंगबुमा घर !
राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने निर्णय लिन शान्त ठाउँ खोज्दै सिन्धुली पुगे प्रचण्ड
साहसी युवतीः जो काठमाडौंदेखि उपर मुस्ताङसम्म स्कुटरमा पुगिन् (भिडि‌ओ)